ပျဉ်ပြား၏အရွယ်အစား projectile ၏ဤပုံစံအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ များသောအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်သည်ဟုအနည်းငယ်အမည်များရှိပါတယ်။ သို့သော် shell ကိုအများစု "အပြိုင်အရက်ဆိုင်" ဟုခေါ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
အပြင်အဆင်မော်တာ "မာကျူရီ": ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ မာကျူရီပတ္ထနာမော်တာ၏အကွာအဝေး
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ "Mercury" သည်စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးရှိသောအပြင်ပန်းမော်တာများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ ဤကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များအနက်အသုံးပြုသူသည် push-pull နှင့်လေးလက်ကိုင်ပြုပြင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ပိုင်ရှင်များ၏သုံးသပ်ချက်ကိုသင်ယုံကြည်ပါက၊
လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်အားကစားဂိမ်းကိုဒီဇိုင်းကစားကွင်းနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ယနေ့ခေတ်ကစားကွင်းရှိရာကလေးများနှင့်လူကြီးများအမျိုးမျိုးသောနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ် ...
စတိုးဆိုင်, တိုက်ပွဲများစိတ်ဓါတ်များနှင့်ရာသီဥတုစုဆောင်းပိုးကောင်များကိုင်တွယ် - နှင့်တီးတိုး။ သင့်အနေဖြင့်လမ်းထိမှန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်မှာ Belgorod အတွက်ငါးဖမ်းခရီးစဉ်နှင့်ဤအံ့သြဖွယ်မြို့၏ပတျဝနျးကငျြဧရိယာပေါ်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်မှသာဖြစ်နေဆဲပင်။ ...
PSO -1 PSO sniper နယ်ပယ် - 1 Sniper မှန်ဘီလူး
အဆိုပါ optical မျက်မှောက်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းစနိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာကိုအလွယ်တကူအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုသေနတ်ပစ်ဘို့မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သာသင်ကအရမ်းဝေးလံသောအကွာအဝေးအတွင်းရည်မှန်းချက်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယင်းကို aperture အချိုးနှင့်တိုးပွားလာ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် ...
Alternative လေဖြတ် dvuhshazhny (ရုပ်ပုံလွှာကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ပုံ) မြေပြင်အနေအထားနှင့်လျှောအမျိုးမျိုးအခြေအနေများအောက်တွင်နှင်းလျှောစီးဖို့ခရီးသှားဖို့အဓိကလမ်းစဉ်းစားသည်။ သူက (2 °အထိ) ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ် ...
CSKA ကို“ မြင်းများ” နှင့်၎င်း၏ပရိသတ်များကို“ မြင်းများ” ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်း။
ဘောလုံးပရိသတ်များစွာသည် CSKA မော်စကိုအား“ မြင်းများ” နှင့်၎င်း၏ပရိသတ်များဖြစ်သော“ မြင်းများ” ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဟူသောမေးခွန်းကိုစိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဘာလို့လဲ ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုဆောင်းပါး၌သင်တွေ့လိမ့်မည်။ CSKA ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ရသည့်သမိုင်းဝင်လေ့လာရေးခရီး ...
ဓါးဝတ်ဆင်ရန်ခံနိုင်ရည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတည်ရှိ။ ဒါဟာဓါးသွား၏ထုတ်လုပ်မှု၏အဟောင်းနည်းလမ်းများ၏ပစ္စုပ္ပန်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်မှာမေ့လျော့ခြင်းနှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုချက်ပြုတ်နည်းများမှပေါ်ရွှေ့ဖို့ဖြစ်နိုင်, ထိုယ့်ပုံပဲ။ ...
အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ကျယ်ပြန့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လုံလောက်အောင်အအေးကဲ့သို့ဖြူပင်လယ်, ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကာရီးစ်နဲ့သမုဒ်အဖြစ်အံ့သြဖွယ် taiga သဘောသဘာဝအများအပြားဆွဲဆောင်။ ပြည်သူ့အသံဗလံကနေ privacy ကိုဒီမှာလာ ...
Chertanovo သည်ကလေးများအတွက်ဘောလုံးကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘောလုံးကျောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
"Chertanovo" - မော်စကိုနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဦးဆောင်အထူးပြုအေဂျင်စီများအပေါငျးတို့သဗဟိုခရိုင်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ပေးသောဘောလုံးကျောင်း, ။ မော်စကိုအစိုးရအဖွဲ့၏သူမ၏ထောက်ခံမှုနောက်ကွယ်တွင်ရှိခြင်း, ဗဟို၏ခေါင်းဆောင်များနိုင်ခဲ့ကြတယ် ...
ခန္ဓာကိုယ် Flex သူတို့အားအပိုကီလိုကိုချွတ်ပစ်ရန်အာမခံချက်ခွင့်ပြုမယ့်ထူးခြားတဲ့စနစ်ဖြစ်သည်။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း၏ဤအစု Greer Childers အတူတက်ရောက်လေ၏။ သူမ၏ယုံကြည်မှုအဘို့, ရလဒ်အတန်းပဲနှစ်ပတ်အတွင်းအပြီးသိသာဖြစ်လာသည်။ more ...
လူတိုင်းကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ရေအကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများသတိထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်ကိုဖြည့်ခြင်း, ဇီဝြဖစ်ထအမြန်နှုန်းအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့အမွတ်မပြေတဲ့ခံစားမှုပေးသည်။ ရေကျယ်ပြန့်အားလုံးအားကစားအတွက်အားကစားသမားအသုံးပြု ...
အလေးချိန်ပါးလွှာတဦးတည်းကောင်လေးရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မကြာခဏများစွာသောမေးထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခု, သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်အကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးသောသူအချို့ရှိပါသည်။ ဒီအလိုဆန္ဒနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သလဲ အရေးကြီးသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် ပတ်သက်. more ...
အိုလံပစ်အလံ - ဘာကိုပုံဆောင်သလဲ
အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အစ Olympia ၏မြို့တောင်ပိုင်းဂရိနိုင်ငံစတင်ခဲ့သည်။ မူရင်းအစီအစဉ်ကိုတဦးတည်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အပြေးဂိမ်းပါဝင်သည်။ ထို့နောက်အစီအစဉ်ကိုပြိုင်ပွဲသစ်အမျိုးအစားများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခံရဖို့စတင်ခဲ့: အပေါ်တစ်ဦးပြေး ...
မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ကရေမြှုပ် nozzle ဖြစ်သောငါးဖမ်း၏လူသိများအသစ်ကအမျိုးအစား, ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်ငါးဖမ်း၏ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လမ်းတွေအကြောင်းဘာမှမသိရပါဘူးသူအချို့ငါးဖမ်းသမား-အပျော်တမ်းနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒီအ ...
အဆိုပါဂိမ်း '' Twister ': စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသားကင်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အခါလူတိုင်းအတွက်ရက်ကတ်အလုံအလောက်မရှိခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြသရန်နှင့်အခြားသူများကိုရယ်မောရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်နှင့်ဆန္ဒထက်မကသောသဘောသဘာဝရှိဖော်ရွေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ရရန်အချိန် ...
မြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သူများ ပို. ပို. ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတကျန်းမာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ဘီးဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တတ်တဲ့။ သို့သော်ဤအမှု၌အစစ်အမှန်ပြဿနာသံအဆင်ပြေသိုလှောင်မှုအတွက်အာကာသကိုရှာစေခြင်းငှါ ...
သငျသညျကိုမည်သို့ပါးလွှာဗစ်တိုးရီးယား Romanet သိလား? အစားအသောက်, အရာအပေါ်သူမသင်သိ, ထိုင်လျက်ခဲ့သလဲ မထားလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ် ...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားပရိသတ်တွေတစ်ဦးတိုးပွားလာ။ ရုရှား၌, သင်ကောင်းသောအပုဒ်အပေါ်စီးရုံတို့သည်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်နိုင်မည့်သစ်ကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားအပန်းဖြေစခန်း, ရှိပါတယ်။ အရ ...
ယုံကြည်နေသောအစားအစာဆေးပြားအနည်းငယ်လျှင်, ကျန်းမာအစားအစာ, ဆန့်ကျင်ပေါ်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအားလုံးအသစ်ကအပေါင်းအသင်းကိုတွေ့။ အမှန်စင်စစ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးအထူးတစ်ခုခု, တစ်ဦးအနည်းငယ်သာသင့်ရဲ့ချိန်ညှိမဖြစ်သင့် ...
17 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,547 စက္ကန့်ကျော် Generate ။